Miis-cuneedka bamboo-dabiiciga ah ee ugu wanaagsan Bambo dheer
Bamboo-dabiiciga ah ee cuntada lagu cuno/miis jikada/miis/miis kulan
Miiska sare wuxuu ka samaysan yahay bambo tayo sare leh oo la doortay, kaas oo ka adag oo cufan marka loo eego alwaax, ma fududa in la xidho oo la beddelo. Lugaha miiska waxay ka samaysan yihiin bjørk, oo leh qaab-dhismeed jilicsan oo jilicsan.
Qaababka bambo-ga dabiiciga ah, qaab-dhismeed kastaa waa mid jilicsan, aad u qurux badan, oo gabi ahaanba dabiici ah iyo deegaan saaxiibtinimo leh.
Dahaarka UV waa deegaan saaxiibtinimo iyo badbaado leh, iyo calaamadaha watermark ma soo baxayaan marka koobabka kulul la saarayo miiska.
Looxa bamboo waxa lagu daaweeyaa kaarboonaysiinta hydrothermal, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara cayayaanka iyo caariyaysiga.
Qaabka casriga ah iyo qaabka fudud, ka takhaluso naqshadeynta ciriiriga ah, qaabka fudud ee khadka fudud ee miiska cuntada ayaa keenaya dareenka ugu yar ee qolka, taasoo ka dhigaysa booskaaga mid nadiif ah, fudud oo raaxo leh.
Miis-badbaadinta booska, miisku wuxuu qaadi karaa 2 ilaa 4 qof, oo ku habboon meelo yar yar ama meelaha cuntada.
Nadiifintu waa sahlan tahay waana sahlan tahay, waxaana lagu xoqin karaa maro jilicsan oo qoyan oo yar iyo saabuun khafiif ah
10 daqiiqo kulan: Adigoo isticmaalaya tilmaamo fudud iyo qaybo nambaraysan, waxaad shaxdan ku dejin kartaa dhawr tillaabo. Waxaa ku jira dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah.
Qalab Bambo ama alwaax
Cabbirka Kartoonka 1210*760*74mm
Baakadaha Aqbal waxka bedelka, bacaha badan;sanduuqa cad;sanduuqa midabka,sanduuqa PVC, tilmaamaha xirmada
Soodejinaya 1 PC/CTN
Miisaanka guud Qiyaastii 13kg
Miiskan casriga ah ee bamboodu waa wax badan oo la isticmaali karo marar badan. Aad bay ugu habboon tahay in loo isticmaalo miiska cuntada ee jikada yar, miiska kombayuutarka ee daraasadda, miiska qoraalka ama miiska ciyaaraha ee qolka fadhiga.
Waxa kale oo loo isticmaali karaa miiska waxbarasho ee carruurta, miiska labiska dumarka, miis shaqo oo cufan, miis, miis yar oo shirarka, waxaana lagu isticmaali karaa guriga ama xafiiska guriga.
Hore: Casri ah oo raagaya alwaax bamboo alwaax alaabta guriga
Xiga: Jumlo Waara Casri ah Timo-Biin Lugaha Wareega Dabeecadda Bamboo Coffee
Casri ah oo raagaya alwaax bamboo t...
Jumlo waara oo Casri ah timo biin Lugta Wareega Natu...
Bamboo jumlo ah oo casri ah iyo shaah alwaax ah ...
Habka Fudud ee Casriga ah ee Birta Bamboo Miiska
Bamboo Dhamaadka Miiska Ama Istaaga Habeenka
Bamboo dabiici ah oo gees leh oo casri ah oo waara...